Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : ravalisonilayatodiorokorokasyireompandroakasarety
Teny iditra Ravalison: Ilay atodiorokoroka sy ireo mpandroaka sarety (atody, oroka, roaka, sarety)
Sokajin-teny anarana (lohatenin-tantara fohy)
Mpanoratra Ravalison Edmond
Voambolana Haisoratra: tantara fohy
Lahatsoratra Dia nisoka tery amin'ny faravodilanitra taza-maso ilay sahafa volamena tsy miangatra. Tsy nahalava oroanana ny tany ny lamba maintin'ny alina fa nalaky sarona izy. Efa dify ela ny "tsy ahitan-tsoratr'omby " fa eo amin'ny loha tory indrindra tamin'izay. Ngaly sady ngizina ny haizin'ambanivohitra fa tsy mba nanana jiro varatra hamotsiana azy iretsy mpamboly mandadiana. Nanjaka tanteraka ny fahanginana, satria tsy afa-nanongana azy eo amin'ny fiketrahany na ny angely basivava, na ny siokam-borona diso akany. Manomboka ho renoka i Sakambahiny, ilay vohitra kelin'i Marovatana nosomparan'ny tendron'Ambohimanoa ka tsy afa-nitsinjo ny alan-tapian' Imamo.
Ireroa mpitondra sarety roa lahy miato amoron-dalana ireroa sisa tsy namono ny afony. Miredareda eo anoloany ny anjavidy maina; mipoapoaka ny tahon'ampanga; midona-tsetroka ny sevabe tsy voakiky. Sady mitanika ny nahandro keliny izy roa lahy no mamindro satria manara ny tafiotran'ny alina. Endrey! izato fiainana tataovam-pahantrana! esoriny avy eo ambony toko ilay maharitrafo pepon'ny ela. Noloarany an-dovia izato sakafo faneson'ny beaingitraingitra: ampangoro mifantsifantsy, varin-dahy, ron-trondro maina sy voatabiha maitso, ranovola manitra. Izany no mba fialeman' iretsy tantsaha lanaky ny asa. Satry dia satry hanao sakafo volana fa izy no tsy azo. Sady mihinana izy roa lahy no tohofany kitay ny fatana. Toa nitsetra azy kosa ny kinta-mitsilopy ka nanarangarana tery anivon-drahona. Alina fialan-tsasatra! Nampirimina ny fitaovana dia indrery niomana hampiraika ny lohany eo ambony mololo izy roa lahy. Fahamboridamba rovitra no hany firakotra; tafon-tsarety gony no sarotro raha toa mivatravatra fiavy ny orana. Aiza no misy fo volamena hangoraka ireny mpitrongy vao homana ireny?
Nandà tsy hanafosafo ny tany ny volana misasaka ila. Sina ny manodidina. Fierotr'olon-droa lahy sisa re avy ao anaty sarety. Mora resin'ny hatrotrahana hay ny olombelona!
Fa tokony ho tra-toraka avy eo amin'iretsy mpitondra sarety iretsy kosa - ao anatin'iroa ambiaty andosiran'avelo iroa - injay misy zava-mihetsiketsika; mitsipatsipaka, mikasaotsaoka. Sendra nivadi-mandry ilay zokiny tamin'izay ka nony reny ny feon'ny ravina maina dia niantsambotra toy ny baolina fingotra izy.
-- Olona, leity, fa mifohaza! hoy izy. Flenavelona ilay zandriny. Nifitsaka toy ny hisatra voatory izy fa tojo ny tampoka tsy maha-lehilahy. Tera-kovitra ny adala.
-- Mitrakà ialahy fa aza rano an-dravina toy io, hoy iroa sahisahy. Tsy ho faty raha tsy hianjeran-tanan-tsotro!
Mbola tsy nivolana ihany Izafilahy. Naili-dRaleva zokiny tsy hanjaka teo amin'ny tenany kosa ny hovitra. Nandroso izy tsy nihambahamba akory hanatona iroa toerana mihetsiketsika. Tsikariny tamin'ny tara-bolana nitsinjo ny diany izay raketin'itsy lobolobo nipoiran'ny ankamantatra: verolava marefo taho, sodifafana mandohalika, kotrokotrobato mamelana, horompotsy tsy misy mpamona satria lavi-pantsakana - ambiaty madiva hamony volom-parasy ..., ary ... - saiky safotry ny hatairana Raleva ka namonjy nitorovoka ... Nahoana? Nanitsaka bibilava masiaka va izy? Tsy bibilava fa bibimora tsy manan-tongotra hitsipaka. Indro, ao anaty ahitra, misy harondakana lavalava; zazakely menavava no matory ao anatiny. Sady talanjona Raleva no hontsa!
-- Ento aty ny afokasoka sy ny fanala, ry Zafilahy a, hoy izy.
Mba novorin'i Zafilahy ny heriny ka narangarangany tao anaty haizina ny totohondriny. Nindraminy tampoka ny famindran'ny lahindefon'Andriana ndeha hanafika ka nifitsaka mbamin'ny tsimbilaotra notetezin'ny tongony.
-- Tsilovy aty, hoy Raleva, Tandremo sao maty ny fanilon'ialahy !
Indro niharihary ny endrik'ilay atodiorokoroka: lahy	kely mahafatifaty, mipitrapitra, mangaihay ... Zanak'iza io? Iza no tsy mifaditrovana nanary azy? Feno zava-miafina ny fiainana. Fonosin'ny olombelona haitraitra ny " marina " mandrakariva ka mila ho voasongon'ny lainga donga takona.
-- Misy tokoa olona manana fo vato, Razoky, hoy i Zafilahy.
-- Lalina tokoa, leiroa, hoy Raleva. Tsy mbola nitohoka ny molony mantsy ny fahorian'ny momba.
Tsy niteraka Raleva. Tsy nanantena hanan-tamingana intsony izy mivady satria efa zokinjokiny ihany. Mazàna ny vavy no latsa-dranomaso nony mijery ny olona mitovy saranga aminy sady mitrotro no mitantana. Raleva kosa mangotika anaty isaky ny mahare ny zanaky ny mpifanolobodirindrina aminy mifalihavanja amin'ny hira hoe: "Tonga i dada ô" !
Sady nisento Raleva no niondrika handray ilay tsy manan-tsiny. Nikiaka kosa ilay kely nony voarain-dRaleva.
-- Sao dia zana-javatra io, Razoky, hoy Izafilahy
-- Aza minomino foana izao antsanga tsy aman'orana rehetra izao ialahy, hoy ny famalin-dRaleva. Zaza narian-dreniny ity. Tsy tiany ka hoentiko. Nitady toko aho ka sendra vato.
-- Sao solofom-bazimba io ka hitaiza zana-baratra ianao?
-- Tsy mihetsi-bolomaso amin'izay vazimba aho. lanareo kely saina no matahotra ho kely ila. Zory ny dia, leiroa, fa rendrika ity isika vao nahazo amalona u.
Tsy nahaleo tohika an-dRaleva i Zafilahy ka nanaraka ambokony. Teny lasalasa tokoa ny azy, fa na ny tenany aza mba nahatakatra miaraka amin'izay hoe: "zaza narian-dreniny ilay kely ity" . Nilaozan'izy mirahalahy ilay toerana, dia indrery izy nitondra ilay menavava ho ao anaty sarety.